Tetikasa fananganana orinasa orinasa, famatsiam-bola, tombon-tsoam-bidy
Top Juridikan'ny orinasam-panjakana mendrika indrindra
Ireto manaraka ireto ny orinasan'ny orinasam-panjakana izay manolotra fiantohana fiarovana, fiarovana ny fitsarana sy ny fiainana manokana. Azonao jerena koa ny fampitahana tabilao ho an'ny offshore LLCs amin'ny fipihana ity rohy ity.
Nevis - Privacy, convenience and stability. Fantaro ny antony mahatonga ny nosy Nevis ho anisan'ny ankamaroan'ny manam-pahefana ankehitriny. Ambonin'izany rehetra izany, Jereo ny fitaovana mahery vaika malaza: ny Nevis LLC.
Belize - Companies, IBC (orinasa orinasa iraisam-pirenena) ary Banky. Ankoatra izany, dia ho hitanao fa manolotra karazam-bidy maro samihafa i Belize. Ohatra, ny Belize LDC, Ny solontenan'i Belize amin'ny LLC dia manome tombontsoa manokana ho an'ny fiarovana.
Bahamasy - Hahazoana maimaim-poana, maimaim-poana sy ambany. Ankoatra izany, azonao atao ny mamaky momba ireo karazana safidy azonao omena anao any Bahamas.
British Virgin Islands - Fiarovana ambony, fiarovan-tena sy fiarovana. Ankoatra izany, azonao atao ny mamantatra ny fomba fiasan'ny orinasa tsy miankina sy ny IBC ao amin'ny BVI mba hiarovana ny harenanao.
Tsindrio eto raha hijery lisitra feno: officielle jurisdictions.
Company Information Offshore
Offshore companies dia orinasa toy ny orinasa na orinasa tompon'andraikitra tompon'andraikitra (LLC) izay nalefa tany ivelan'ny tanin'ny firenena iray. Ny olona izay mampiditra orinasa an-dranomasina dia manao izany, ankoatra ny zavatra hafa, rehefa liana amin'ny fiarovana ny fiantohana, ny fanitarana ny raharaham-barotra ary ny fiainana manokana ara-bola. Ankoatra izany, ny fanazavana etsy ambany dia mamintina ny antony mahatonga ny olona hamorona ireny singa ireny:
Fandaniam-bola (miankina amin'ny fahefanao)
Lalàna ara-barotra manjavozavo
Fanamafisana ara-bola iraisam-pirenena
Tetik'ady fananganana orinasa Offshore
Eto, dia hahita lisitra maromaro an-dranomasina maromaro ianao tetikasa fiarovana fiarovana, ny vola sy ny tombony azony. Ankoatra izany, ity fizarana ity dia miresaka momba ny lafiny manan-danja amin'ny planeta afovoan-tany, tafiditra ao anatin'izany ny orinasa, ny banky any ivelany ary ny fitokisana, ny fomba amam-panaovana azy ireo ary ny antony. Ny tena manan-danja indrindra dia afaka manangana kaonty amin'ny banky ho an'ny orinasan'ny orinasam-pifandraisana tsirairay. Azonao atao koa mianatra momba offshore bank Eto.
voalohany, pitsarana maro avy any ivelany manana rafitra ara-dalàna miavaka amin'ny lalàna ho an'ireo mitady fiarovana sy tombontsoa ara-bola. Diniho ireto Fiantohana ny fananganana orinasa an-tsena ary zava-misy. Mariho, ny Etazonia dia manana ny 4.4% an'ny mponina eran-tany, nefa ny 70% amin'ireo mpisolovava erantany ary ny 96% amin'ireo hetsik'izao tontolo izao. Ankoatra izany, tsy toy ny firenena hafa eto amin'izao tontolo izao, Tsy mila mandao ny rafitra ara-dalàna isika. Mifanohitra amin'izany kosa, any amin'ny firenena hafa, ny tsy fahavitan'ny fitsarana dia mila mandoa ny saram-pandraharahana ataony sy ny mpanohitra azy. Noho izany, ny lalàny dia mahatonga ny fitsarana tsy hihodina matetika.
Offshore Company = Miala ny mpiray tanindrazana
Ao Etazonia raha toa ianao ka tafiditra am-ponja sy mahazo fandresena, mbola mivoaka ny fandaniana ara-dalàna anao, noho izany dia mbola very ianao. Etsy ankilany, Ny fiampangana orinasa an-dranomasina dia sarotra kokoa. Ohatra, avelao ny mpahay lalàna iray hifidy ny hitory ny orinasa afovoanareo. Angamba izy tsy maintsy mandefa fifamatorana mba hananana ilay raharaha nalefan'ny birao fandatsaham-bato. Izy ireo kosa, indray mandeha, dia mamaritra raha tsy hitranga any amin'ny fitsarana mihitsy aza ilay raharaha. Matetika, ny fatorana dia tsy azo averina. Vokatr'izany, tsy maro ny olona mametraka fitoriana. Noho izany, ity dia fiarovana matanjaka henjana. Amin'ny teny hafa, amin'ny alàlan'ny fanararaotana ny lalàna ara-pitsarana an-tserasera dia mampihena be loatra ny fepetra misy ny olona manenjika anao.
miaraka a Nevis LLC, ohatra, ny fanitsiana 2015 dia nanao mpampindram-bola hametraka $ bondage 100,000 alohan'ny azon'izy ireo atao mba hananganana fitsarana amin'ny mpikambana iray ilay orinasa. Ireo mpanao lalàna Nevis dia nanatsara ny sata tao amin'ny 2018 izay nanome ny fitsarana an'i Nevis ny fahefana hametrahana ny fatorana vola. Ny vola voavonjy amin'ny alàlan'ny fitazonana ny toe-bola eo an-dalam-pandrenesana ny maso, noho izany, ny fisorohana ny lalàna, ny fiarovana ny fanananao amin'ny fitsaràna ary ny fitomboana ara-bola bebe kokoa dia antony vitsivitsy ho an'ny fialana an-tsambo. Ny fahefana hafa ho an'ny LLC dia ny nosy Cook. Azonao atao ny mamaky ity lahatsoratra ity ao amin'ny Nevis LLC vs Cook Islands LLC izay mampitaha ny tarika roa.
Karazana orinasa orinasa
Zava-dehibe iray hafa koa izany Ny orinasa Offshore dia manolotra tombontsoa ara-bola bebe kokoa noho ny singa ao an-tokantrano karazana. Ohatra amin'izany ny vondron'orinasa, orinasa tsy miankina na orinasa orinasa iraisam-pirenena (IBC). Maro ny jurisdiction offshore izay lalàna tsara kokoa izay an'i Etazonia, Kanada na UK. Ireo jurisdictions ireo dia mifaninana ho an'ny mpanjifa iraisam-pirenena. Vokatr'izany, ny lalàny manohana ny fiainana manokana momba ny fananana, ny fiainana manokana ho an'ireo manamboninahitra sy mpitantana ary tsy fanekena ny vahiny didim-pitsarana.
Araka ny hita, ny fanakianana ny fitokonan'ny mpikatroka amerikanina dia avo. Ankoatra izany, maro ny mpisolovava mitsipaka fotsiny mba hivelomana. Raha ny marina, ny sasany dia tsy mahita ny ao anatin'ny efitrano fitsarana. Izany hoe, mampiasa ny rafitra ara-dalàna izy ireo mba hanerena ireo mpitarika ny orinasa any amin'ny faritany tsy misy dikany. Azonao atao ny mianatra bebe kokoa momba ny orinasa offshore fahatongavana ho fikambanana izany afaka manampy amin'ny fiarovana anao amin'ny miantso an'i OffshoreCompany.com na by mameno ny endrika eto amin'ity pejy ity. Izahay no mamorona toeram-piasana an'arivony isan-taona, manampy ny Amerikana an'arivony amin'ny fiarovana azy ireo sy ny fiainany manokana ary manolotra fitarihana amin'ny orinasa rehetra any ivelany fombafomba.